एक हिरोइनको आध्यात्मिक रूपान्तरण - KhabarBarsha
घर मनोरञ्जन गशिप एक हिरोइनको आध्यात्मिक रूपान्तरण
एक हिरोइनको आध्यात्मिक रूपान्तरण
२०७८, २ श्रावण शनिबार ११:१९
भर्खरै थामिएको मुसलधारे झरीले नागार्जुन पारिका वनपाखा निथ्रुक्क भिजेका छन् । डाँडामाथिको बादल हटिसकेको छैन । कालो बादललाई चिरेर छरिएका घामका किरणमा इन्द्रेणी परेको छ ।
तल खोंचमा बगेको पानीको ध्वनि, झ्याउँकिरीको एकनासे आवाज र चराहरूको चिरबिरले संगीतमय झंकार पैदा गरेको छ । यद्यपि त्यहाँ बेग्लै शून्यता छ । नीरव अनि निर्जन !
आफैंमा ध्यानमग्न लाग्छ, ओशो तपोवन ।
मध्यभागमा अवस्थित ध्यान-मन्दिरभित्र नौजवान चेला-चेली बेपर्वाह नाचिरहेका छन् । कोही-कोही बगैंचामा यत्तिकै टहल्दैछन् ।
गेरु रंगको कुर्ता, सेतो सुरुवाल । गलामा ‘ओशो’ अंकित माला । यो रुपरंगमा उनलाई देखेपछि स्मरण हुन्छ उनले नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका केही पंक्ति । सोविताले यसरी लेखेकी छिन्-
सोविता किन ‘आफूलाई मेटाउन’ चाहन्छिन् ? संभवतः उनी विराट शून्यतामै जीवनको सार भेट्छिन् । र, त्यसमा आफूलाई समाहित गर्न रुचाउँछिन् । आकांक्षा, लोभ, माया-मोह, डर, घृणा, अहंकार, पछुतो, ग्लानि, दम्भ, कुण्ठाबाट मुक्त जीवन । न भूत, न भविष्य । वर्तमानमा जिउन चाहन्छिन् ।
’cause सोविता ‘ओशो संन्यासी’ हुन् । र, उनको सेरोफेरो ओशो तपोवन । ध्यान गर्छिन्, प्रवचन सुन्छिन्, भक्ति-साधनामा लीन हुन्छिन् । आध्यात्मिक विमर्श गर्छिन् । आफैंमा मग्न हुन्छिन् ।
बिहानको नास्ता तयार हुन्छ । ११ बजेबाट पुनः ध्यान शुरू हुन्छ । अनि दिवा-खाना । खानपान सात्विक हुन्छ । खानपानपछि उही क्रम शुरू हुन्छ, ध्यान, योग, प्रचवन । उनको दिनचर्या दुई वर्षदेखि यस्तै वितेको छ ।
तर, करियरको पूर्वार्द्ध ठीक विपरीत थियो । अनेक रहर, आकांक्षा, मोह, प्रतिस्पर्धा, स्क्याण्डल Û त्यो बखत उनी आफूलाई दुनियाँसामु चिनाउन चाहन्थिन् । नाम र चर्चाको उल्कै भोक थियो सोवितालाई ।
सोविताको विगत : टिभी होस्टदेखि हिरोइनसम्म
मोडलिङ छाडिन् । एसएलसी नतिजा आयो । पढ्न थालिन् । तर, नामको मोहले कहाँ छाड्ने ? एक टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि अडिसन दिन गइन् । टेलिभिजनमा मौका मिल्यो । कार्यक्रम थियो ‘नमस्ते कलिउड’ ।
ओशो भक्त आमाबुवा । बुवाले ध्यान गराउँथे । गाउँभरका मान्छेहरू भेला हुन्थे । घरमा भजनकीर्तन हुन्थ्यो, प्रवचन सुनाइन्थ्यो, योग ध्यान गरिन्थ्यो । सात्विक परिवार, आध्यात्मिक माहोल ।सोविता सुनाउँछिन्- ‘मलाई कतिसम्म भएको थियो भने ! बाटोमा हिंड्दा, सार्वजनिक बसमा चढ्दा अरूले देख्छ, चिन्छ भन्ने डर हुने । त्यसबेला मसँग स्कुटर पनि थिएन । ट्याक्सी चढ्नुपर्ने । ट्याक्सी चढ्नकै लागि मैले कति त गरगहना पनि बेचें ।’
बुवाआमाकै संगतमा उनले ओशो चिनिन् । ध्यान र योगलाई बुझिन् । बेलामौका तपोवन धाइन् । तर, सोवितालाई ‘संन्यासी’ बन्नु थिएन । सांसारिक जीवनबाट विमुख हुनु थिएन । ’cause उनलाई त ‘ग्ल्यामर संसार’को चमकदमकले आकर्षण गरिसकेको थियो ।
लाइट, रिफ्लेक्टर, क्यामेराको सम्मुखमा उभिएर उनले अनेकथरी जीवन बाँचिन् । कहिले प्रेमिका, कहिले श्रीमती, कहिले बुहारी, कहिले बहिनी । यी सम्पूर्ण जीवनभित्र आफू कहाँ छु ?
कता-कता अलमलिए जस्तो । कुनै भेउ नपाए जस्तो । बाटो बिराए जस्तो । जीवनको फेरो नभेटिए जस्तो ।
‘एउटा पुरुषले कसैसँग सेक्स गरेमा उसले त्यो कुरा खुलेआम भन्न सक्छ, त्यही कुरा एउटी महिलाले भन्न सक्दिनन् । किन ?’ यो प्रश्नले उनलाई सोचमग्न बनाउँछ ।पुरुषले बनाउने सिनेमा त यस्तो नै हुनेभयो, महिलाले बनाएको वा नारीप्रधान फिल्ममा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ’, सोविता भन्छिन् ।
महिलालाई केन्द्रीय भूमिकामा राखेर, गुण्डाहरूको रामधुलाई गराएर मात्र नारी सशक्तीकरणको दृष्टान्त पेश गर्नु आफैंमा टिठलाग्दो कुरा हो । उनी भन्छिन्, ‘नारीप्रधान फिल्ममा हिरोइनलाई एक्सन लेडीको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । सात तलाबाट उफ्रिएर गुण्डाहरूको रामधुलाई गर्दैमा त्यसले महिलाको शक्ति देखाउँछ र ?’
विशिष्ट गुण र क्षमता हुन्छ । उनीहरू धैर्यवान्, सहनशील हुन्छन् । हामीले सिनेमामा नारीको यस्तै गुणलाई सुन्दर ढंगले पेश गर्नुपर्ने होइन र ?’ सोविताको प्रश्न छ ।
अघिल्लो लेखमापरिमार्जनसहित आयो टेलिकमको समर अफर
अर्को लेखमाओली समूहका सांसद मन्त्री माग्दै बूढानीलकण्ठमा !